कुलमानको भाग्य चम्किने संकेत, मन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव बाहिरियो ! — Imandarmedia.com
कुलमानको भाग्य चम्किने संकेत, मन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव बाहिरियो !
काठमाडौँ। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाउन जोडदार माग भएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्राधिकरण भन्दा मन्त्रालयकै नेतृत्व जरुरी भएको भन्दै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफलेले घिसिङलाई उर्जामन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
बिधि र पद्धतीअनुसार बिद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख नियुक्त गर्ने कुनै आधार छैन, अहिले चार बर्षका लागि हितेन्द्रदेव शाक्य प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई हटाउन सक्ने कानून छैन, कानुनी आधारबिना बिद्युत प्राधिकरणमा कुलमानलाई नियुक्त गर्न सकिदैन, काफ्लेले भने, कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा राम्रो काम गर्नुभयो, आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जानुभयो, अव उहाँलाई नै उर्जामन्त्री बनाउनु पर्छ।
काफ्लले जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेलमा मन्त्री र माओवादी नेतृत्व लागेको आरोपसमेत लगाउए। कुलमान उर्जामन्त्रीका लागि योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्छ। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा बिद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले भने, उनले यो प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल तयार हुनुहुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि गरे।
यो पनि : राजीनामा दिन तयार छु भन्दैँ हिडिरहेका शाक्यले कुलमानको नियुक्ति रोक्न भित्रभित्रै यतिसम्म गरिरहेको खुलासा, अब के गर्ला देउवा सरकार ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊजामन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाक्यले बाहिर राजीनामा दिन्छु भनिरहेका बेला भित्रभित्रै कुलमानको नियुक्ती रोक्ने अनेकन जुक्ती लगाईरहेको खुलासा भएको हो ।
प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने सरकारले तयारी थालेपछि शाक्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफूलाई प्राधिकरणबाट अक्षम भनेर हटाइए त्यो सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। स्रोतका अनुसार जबर्जस्ती हटाउन खोजे अदालत गएर कुलमानको नियुक्ती रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताईन्छ ।